Seychelles, izay nosy hisafidy fialan-tsasatra tsara indrindra any paradisa | Vaovao momba ny dia
Seychelles, izay nosy voafidy amin'ny fialantsasatra tsara indrindra any paradisa
Mariela Carril | | mpitarika, Nosy Seychelles
Tsy isalasalana fa iray amin'ireo toerana tora-pasika tsara indrindra sy mora ampiasaina any Eropa, raha tsy te-hiafara amin'ny moron'ny Mediteraneana ny olona iray, dia ireo no Nosy Seychelles. Vondron 'i Nosy 115 any amin'ny Ranomasimbe Indianina, amin'ny fasika fotsy, toetr'andro mafana, ala maitso, hazo kanelina ary fiadanam-po mahafinaritra.
Tsy mahalala olona tsy nankafy Seychelles aho, koa raha amin'ity fahavaratra ity dia mieritreritra ny hahafantatra azy ireo ianao, dia misy fanontaniana vitsivitsy tokony horesahinao mba "hitrandrahana tsara indrindra ny traikefa" fidio izay nosy Seychelles haleha.
1 Nosy Seychelles
2 Nosy Praslin
Ireo nosy mihoatra ny arivo kilometatra miala ny morontsirak'i Afrika izy ireo, any amin'ny faritr'i Maorisy na Madagasikara. Ny renivohitry ny nosy dia Victoria ary ny isan'ny mponina dia manodidina ny olona sivy alina. Io no fanjakana mahaleo tena kely indrindra eto Afrika ary nahatratra izany fahaleovantena izany tamin'ny 1976, rehefa nitsahatra tsy an'ny United Kingdom izy, na dia ao anatin'ny Commnwealth aza izy io.
Amin'izao fotoana izao dia tsy misy afa-tsy nosy 16 izay manome trano honenana, ka rehefa manapa-kevitra ianao hoe aiza no hijanonanao dia azonao atao ny manamarina ny tolotra amin'ireo nosy ireo, io no dingana voalohany rehefa mandamina ny dia. Misy trano fandraisam-bahiny sokajy dimy kintana miaraka amin'ny rendrarendra rehetra mankany amin'ny trano fandraisam-bahiny na kabine ambonivohitra kokoa eo amoron-dranomasina. Ka na tsy manam-bola be aza dia afaka mankafy
Ny toerana, na inona izany na inona, dia tsara tarehy sy amin'ny nosy rehetra anananao fotoana mety milomano, milentika masoandro, misitrika, snorkeling na miadana fotsiny ny revs an-tanàn-dehibe ary miala sasatra.
Nosy faharoa lehibe indrindra izy an'ny vondrona ary onenan'olona 6500 nefa mbola nosy mangina be izy io, tsy dia mandroso noho Mahe, ohatra, ary atoro anao raha te hiala sasatra sy hiala sasatra ianao ihany. Mahafinaritra ny torapasika ary ny roa amin'izy ireo dia matetika amin'ny morontsiraka tsara indrindra eto an-tany: Anse Geogette, Cote D'Or ary Anse Lazio. Raha te hilalao golf ianao dia izao no toerana any Seychelles satria Manana golf golf 18 lavaka izy io.
Ny hisafidiananao ity nosy ity dia tsy hisakana anao tsy hitsidika ny hafa satria azonao ampiasaina izany toby fitsangatsanganana sy fitsangantsanganana. Afaka mahita vorona ao amin'ny Nosy Cousine ianao, ala honko ary sokatra goavambe ao amin'ny Nosy Curieuse, na milomano sy snorkel ao St. Pierre. Ao amin'ny Praslin mety misy tanàna telo: Baie St Anne, Grande Anse ary Anse Volbert. Aorian'izay dia tsy misy mponina intsony.
Ny morontsiraka manodidina azy dia tsara, tonga lafatra amin'ny karatra paositra, misy rano turquoise sy fasika tsara toto. Ny morontsiraka no zavatra tsara indrindra amin'ny PraslinIzany ary ny vibe backpacker milamina dia izay manjaka, na dia mila trano fialan-tsasatra dimy aza ianao dia azonao atao izany satria misy roa, Raffles sy Lemuria, miaraka amoron-dranomasina manokana, cabins tsirairay ary ny rendrarendra rehetra ilainao. Ny morontsiraka avaratra dia tsara kokoa noho ny atsimo, Ataovy ao an-tsaina izany. Hivezivezy manerana ny nosy misy ny bus sy taksibe mora vidy fa afaka manofa toa ny manofa fiara ianao.
Ahoana no ahatongavanao any Praslin? Tonga amin'ny sambo avy any La Digue na avy any Mahe ianao, ao anatin'ny 45 minitra ny fitsangatsanganana any catamaran avy any Mahe na 15 fotsiny avy ao La Digue. Ny mitaingina dia tsara tarehy sy be volo, ka afaka mandray fiaramanidina ianao. Avy any La Digue ny fiampitana dia milamina kokoa sy fohy kokoa. Raha manidina amin'ny Air Seychelles ianao dia afaka mampiditra fijanonana ao Praslin ka diniho izany safidy izany.
Mahé dia toa moron-dranomasina enina amby enim-polo sy zorony miafina manerana ny toerana. Izy io dia manana atitany tena miloko, maintso tokoa, ary ny morontsiraka dia fasika fotsy. Ny kolontsaina dia Creole ary misy tanàna kely ankoatry ny tanàna, toa an'i Mahe Io no nosy lehibe indrindra sy be mponina ao Seychelles. Victoria, renivohitra, dia eto amin'ny morontsiraka avaratra atsinanan'ny nosy.
Raha tsy te-hieritreritra be ianao na te hiala amin'ilay fizahan-tany manan-danja indrindra, dia mety ho tonga any Mahe ianao: misy ala mikitroka, misy tendrombohitra, misy riandrano, misy morontsiraka, afaka manao spaoro amin'ny rano be ianao. Afaka manao hetsika maromaro ianao, amin'ny lafiny karazany, noho ny amin'ireo nosy malaza hafa. Ny fifangaroan'ny tanàn-dehibe sy ny natiora amin'ny refy sahaza azy satria tsy New York ihany koa i Mahe.
Morne Seychellois National Park dia mizara ny nosy ho faritra andrefana sy atsinanana. Ala tropikaly izy io ary 900 metatra ny haavony. Raha midina ao Victoria ianao dia afaka mandray bus na taxi izay mandeha amin'ny làlana ary miampita ny tendrombohitra mankamin'ny morontsiraka andrefana izay misy resort tsara, torapasika rano tony ary toerana fizahan-tany mahaleo tena kokoa amin'ny vidiny lafo. Eto toerana iray malaza dia ny spa Beau Vallon fa raha manohy mandeha ianao dia misy vohitra sy torapasika mahafinaritra hafa, miaraka amin'ny olona vitsy kokoa.
Toerana iray hafa mahaliana dia Anse Royal, tanàna salantsalany misy trano fisakafoanana, tsena ary fivarotana. Amin'ny morontsiraka atsimo dia tsy hahita zavatra mandroso kokoa ianao fa hahita morontsiraka tsara indrindra any Mahe. Afaka mampitaha ny tenanao amin'ny morontsirak'i Paslin na La Digue ve ianao? Raha morontsiraka nofinofy ny anao dia nofidiko ireo nosy roa farany ireo, ratsy kokoa noho ny fisalasalana Mahe dia manolotra combo mahaliana raha toa ianao ka mianakavy mandehandeha.
Izany no ho didiko: Ny fianakavian'i Mahe dia tolo-kevitra kokoa.
Nosy kely indrindra izy io amin'ireo nosy onenana. Misy olona 2 arivo monja velona, tsy misy seranam-piaramanidina ary zotra vitsivitsy. Toerana misy ny milamina sy milamina indrindra nefa manana morontsiraka tsara indrindra sy malaza indrindra. Azonao atao ny mahafantatra an'i La Digue avy any Praslin na Mahe fa raha tianao ny onja mangina dia mety izany no halehanao.
Ho tonga any amin'ny tanànan'i La Passe, any amin'ny morontsiraka atsinanana ianao, izay ahitanao ny nosy Praslin. Tsy dia lavitra ny tanàna. Ny morontsiraka tsara indrindra dia ny morontsiraka atsimo, amin'ny lafiny ilan'ny havoana, Anse Source D 'Argent, Petit Anse, Grand Anse, Anse Cocos. Any avaratra dia misy an'i Anse Severe sy Anse Patates. Voalaza hatrany fa ny morontsiraka Syechelles tsara tarehy indrindra dia ny Source D'Argent ka aza hadino izany.
Mifindra miala amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa miaraka amin'ny fahalalahana afaka manofa bisikileta ianao. Raha mijanona amin'ny trano fandraisam-bahiny ianao dia azo inoana fa homeny anao maimaim-poana izany, saingy misy magazay manofa maro. Mividy sakafo sy fisotro ianao ary mandeha mitsangatsangana, tsy tsara ve izany? Vitsy ny fiarakaretsaka ary ny sarany dia tsy dia lafo, na dia afaka manofa azy ireo mandritra ny antsasaky ny andro na iray andro aza ianao raha tsy te-hitondra bisikileta. Misy serivisy fitaterana bisy izay mitondra anao manodidina ny nosy ihany koa.
Ho an'ny trano manara-penitra dia safidy iray ihany: La Domaine De L'Orangerie. taty aoriana misy trano fandraisam-bahiny kely sy hotely fandraisam-bahiny miaraka an-dakozia. Ny ankamaroan'ny trano dia ao an-tanàna fa tsy amoron-dranomasina, fa satria kely ny nosy dia tsy lavitra ny ranomasina mihitsy ianao. Ary ahoana no ahatongavana any La Digue? Misy ferry fito isan'andro avy any Praslin. 15 minitra ny dia ary 15 euro ny vidiny.
Tsy misy mivantana avy any Mahe ka tsy maintsy mandeha sambo mankany Praslin ianao ary avy eo mankany La Digue fa amin'ny tapakila tokana no anaovana izany. Misy serivisy roa isan'andro ary manodidina ny 65 euro ny tapakila. Somary lafo, sa tsy izany?
I Mahe, Praslin ary La Digue no nosy telo mpizahatany indrindra any Syechelle. Samy tsara tarehy daholo izy telo, tsy misy handiso fanantenana anao izy rehetra, fa fakafakao tsara hoe inona ny karazana fialan-tsasatra tadiavinao mba hankafizanao azy ireo rehefa mendrika. Tsara vintana!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » mpitarika » Seychelles, izay nosy voafidy amin'ny fialantsasatra tsara indrindra any paradisa